YI စမတ်ဖုန်း၏ gimbal ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အင်္ဂါရပ်များ၊ စမ်းသပ်မှုများ၊ စျေးနှုန်း၊ | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Android ထုတ်ကုန်များ, reviews
ဒီနေ့ Androidsis မှာမင်းနဲ့စကားပြောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ ခေတ်မှီသည့် gadget တစ်ခု။ YI Technology မှကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်အနည်းငယ်နှင့်“ ကစား” နိုင်ခဲ့သည် gimbal။ ဒီအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေဆုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ သင်၏ဗွီဒီယိုများကိုအရည်အသွေးမြင့်တက်စေလိုပါကဤစာကိုကြည့်ပါ
သင်တို့ရှိသမျှသည်သေချာပေါက်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့, ငါတို့သည်လည်းအသစ်က "ကိရိယာများ" ကြိုးစားရန်ကိုချစ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းအတွေ့အကြုံက YI စမတ်ဖုန်း gimbal ဒါဟာအလွန်အပြုသဘောဆောင်ခဲ့သည်။ သေချာပါတယ် စမတ်ဖုန်းမှတဆင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် တိုးတက်မှု ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အများကြီး။ ဒီ gimbal ကိုလည်းသင်လုပ်နိုင်ပါတယ် YI Gimbal စမတ်ဖုန်း
1 Gimbal ဆိုတာဘာလဲမသိသေးဘူးလား။
5 တစ် ဦး ကချုပ်လုပ်လျှောက်လွှာ
အကယ်၍ သင်သည်ဤစာမူ၏အစကိုဖတ်နေသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည်ကိုသင်မသိသေးလျှင်မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ Gimbal ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမင်းမသိသေးဘူးဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကဆာဗာတစ်ခုကိုငါ ၀ န်ခံရမယ်။ အဓိကအချက်ကဒါပဲ ၎င်းသည်အသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ဓာတ်ပုံလောကတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည် အများဆုံးကျွမ်းကျင်သူအဆင့်မှာ။
ဒီသုံးသပ်ချက်မှာငါတို့ဘာပြောနေတယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးကောင်းကောင်းသိဖို့အတွက်၊ ဒါကဘာလဲ၊ အိုးကဘာလဲဆိုတာကိုမင်းကိုအရင်ပြောပြမယ်။ တစ် ဦး က gimbal အာရုံခံအများအပြားပါရှိသည်တစ်ပန်းကန်ကိုကျေးဇူးတင်ဤကိစ္စတွင်, ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မော်တာပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင် accelerometers နှင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ရှိသည်။ သူတို့ရရှိတဲ့အရာ ခေတ်မီဆန်းပြားသော algorithmic programming ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကင်မရာ၏တည်ငြိမ်မှုကိုအစဉ်မပြတ်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ကိုင်သော gimbal ပေမယ့်ဆိုလိုသည်မှာ ကင်မရာသို့မဟုတ်ဖုန်းတုန်ခါနေပြီး၊ ရိုက်ချက်များသို့မဟုတ်ဖမ်းယူမှုများတည်ငြိမ်နေလိမ့်မည် အချိန်တိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည့် YI Technology gimbal တွင်ပုဆိန်သုံးခုရှိသည်။ ငါတို့ပြောသကဲ့သို့ပုဆိန်နှစ်မျိုးသာတွေ့သော်လည်းနှစ် ဦး စလုံးသည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းအတွက်ကာလကြာရှည်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
သင်၏လက်၌တစ် ဦး gimbal အတူ တုန်ခါမှုနှင့်အတူဗွီဒီယိုများမရှိတော့ပါ သို့မဟုတ်ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် (မူးဝြေခင်းပေးသောသူတို့၏) ။ ကျွန်တော်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုများသည် gimbal ကိုင်ဆောင်သူရွေ့လျားနေသည့်တိုင်အလွန်လက်ခံနိုင်သောတည်ငြိမ်မှုကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းစမတ်ဖုန်းလောကသို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သောအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်၎င်းကိုဆက်ထိန်းထားရန်ပုံရသည်။
ပထမတစ်ချက်မှာပေမယ့် ဒါက "ညှိ" selfie ချောင်းနဲ့တူပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါ YI နည်းပညာ gimbal အက်ရှင်မီတာနှင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်သုံးခုရှိသည် သင်၏ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်အရည်အသွေးပိုကောင်းလာလိမ့်မည်။ ဒီ gimbal ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စမတ်ဖုန်းလောကတွင်တိုးတက်ရန်နေရာများရှိနေသေးပုံကိုလေ့လာခြင်းသည်အတွေ့အကြုံများစွာဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်တယ်၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံပြီးကျွန်ုပ်တို့သေတ္တာထဲ၌ရှိသောအရာများသည်ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းစာရင်းပြုစုပါ။ ဤအခါသမယတွင်သင်မြင်တွေ့ရမည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်စရာကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရပါ။ တကယ်တော့ငါတို့မျှော်လင့်ထားတာကလွဲလို့ဘာမှမရှာဘူး။
YI စမတ်ဖုန်း gimbal ၏ box အတွင်း၌သာရှိသည် ကျနော်တို့ YI စမတ်ဖုန်း gimbal တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အို ထို့အပြင် USB ကြိုးတစ်ခုလည်းပါဝင်သည် ဒီထူးခြားတဲ့ gadget ရဲ့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းဖို့အစဉ်အလာထွက်ပေါက်နဲ့အတူ။ ဘာအတွက်လဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီ၏သိလိုစိတ်သို့မဟုတ်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေခြင်းကိုစိတ်ထဲမထားပါ။ သို့သော်ယင်းသည်မဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အရေးမကြီးပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုပြုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် device ၏ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုစတင်ပြောဆိုသည်။ ဤအခါသမယတွင် gimbal ၏ဒီဇိုင်းအကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၎င်းကိုစမ်းကြည့်ကြပါစို့။ ပစ္စည်းတွေအကြောင်းစပြောကြရအောင်။ YI နည်းပညာ၏ gimbal သည် ထိတွေ့မှုအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းအားမြင့်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထုတ်လုပ်သူအဆိုအရ၎င်းသည်ရေတံခွန်များ၊ ပြန်တယ်များနှင့် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာအချိန်ကုန်လွန်ခြင်းကိုခုခံတွန်းလှန်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ၊ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါက selfie တုတ်နဲ့တူတယ် လက်နှင့်အတူဆုပ်ကိုင်ရန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။ ဒါပေမယ့်အချောသတ်၊ နူးညံ့မှုနဲ့အရည်အသွေးနဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့သူရဲ့အိမ်ကနည်းပညာကအလွန်ကွဲပြားခြားနားစေပါတယ်။ ၎င်း၏ခြေရင်းတွင်လက်ရှည်လျားစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည့်လက်ရှည်တစ်ချောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်သက်သောင့်သက်သာစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အပေါ်ပိုင်းမှာတော့လက်မနဲ့ကိုင်တွယ်ရမယ် ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်များ.
ခလုတ်areaရိယာ၏အောက်ခြေတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာပါ မီးခလုတ်။ YI သည်၎င်း၏ gimbal အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကိုယ်ပိုင် application မှဤ button ကို နှိပ်၍ အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုသည်။
မီးခလုတ်၏အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုတ်နှစ်ခုကိုအပြိုင်တွေ့ရသည်။ The "Mode" ခလုတ်ကို ရွေးရန် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံအသုံးစနစ် ငါတို့လုပ်မယ့်အကြောင်း။ ၎င်းတို့ထဲမှဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ အချိန်အပိုင်းအခြားနှင့်အခြားများစွာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အရောင်ကိုပြောင်းလဲစေသော LED မီးသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသော mode ကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မည် ပြီးနောက် ပါဝါခလုတ်ကို ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်နှိပ်ရမည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အလွယ်တကူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်အလွန်ရိုးရှင်းသောထိန်းချုပ်မှုများကိုတွေ့ရသည်။
ခလုတ်အားလုံးအထက်တွင် YI စမတ်ဖုန်း၏ gimbal ပါ ၀ င်သည် မင်္ဂလာပါ။ ဒီဇိုင်းနှင့်လက်မနှင့်အတူသဘာဝကျကျထိန်းချုပ်ထားခံရဖို့ positioned ။ ငါတို့ဘယ်သန်လားညာညာပဲဖြစ်ဖြစ် YI ရဲ့ gimbal joystick လက်လှမ်းမီမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုကကိတ်မုန့်တစ်ခုပဲ။ Joystick ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသော mode ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်အတိုင်းစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကင်မရာကိုလှည့်နိုင်သည်။
ထိပ်မှာ "လက်ကိုင်" အထက်မှာငါတို့သုံးပုဆိန်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် algorithm-based configuration များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကင်မရာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းများသည်တည်ငြိမ်မှုအမြဲရှိစေရန်အလုပ်လုပ်သည်။ သူ့ လှုပ်ရှားမှုချောမွေ့နှင့်တိကျသည်။ ပြီးတော့ဂီယာနဲ့စံကိုက်ညှိဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာပြသထားတယ်။
ဖုန်း (သို့) ကင်မရာကိုနေရာချမဲ့နေရာမှာကိရိယာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရာဘာပရိုဖိုင်းရှိတယ်။ ဖိအားညှပ်တစ်မျိုးကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပူးတွဲပါရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပိုမိုကြီးမားသောကိရိယာများတပ်ဆင်ရန်နှင့်အလှည့်အလှည့်ကိုမဆုံးရှုံးစေနိုင်သည့်“ အခွံနှစ်ခု” လည်းရှိသည်။
ဒါဟာ gimbal ရွေ့လျားပုံကိုချောချောမွေ့မွေ့ကြည့်ရတာဝမ်းသာစရာပါ။ YI စမတ်ဖုန်း gimbal ကိုအထူးဂရုပြုပြီးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ဗီဒီယိုများတွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုမမြင်သာနိုင်ပါ။ ၎င်း၏ဝင်ရိုးသုံးဆကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ မလွယ်ကူပါ အထိ320ºအကွံ။ ကျွန်ုပ်တို့ရွေ့လျားသည်၊ သို့သော်ဖုန်းသည်စံပြအနေအထားတွင်ဆက်လက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
အလှည့်သည်လည်း320ºသို့ရောက်ရှိသည်။ ကင်မရာတည်ရှိရာအစိတ်အပိုင်းမပါဘဲသင်၏လက်၌လက်ကိုင်ဖြင့်စက်ဝိုင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော joystick ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည် 360ºအပြည့်အဝဒယ်အိုးထောင့်.
YI စမတ်ဖုန်း gimbal ကို၎င်း၏ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ကွဲပြားသောရှုထောင့်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများအရည်အသွေးနှင့်ခုခံနိုင်မှုသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောကြောင့်၎င်းသည်လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်မှုအတွက်အခြားတစ်ခုမှထင်ရှားသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း, YI gimbal ကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန် လည်း အခြားသူများထံမှထွက်မတ်တပ်ရပ်ပါစေ.
ရက်ရောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 850 mAh ဘက်ထရီ ကျွန်ုပ်တို့၏ YI စမတ်ဖုန်း gimbal ကမ်းလှမ်းသည်။ USB port မှတဆင့်အားသွင်းရုံဖြင့်အားပြည့်ပြီးတစ်နေကုန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်နေ့လုံးကျွန်ုပ်တို့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုထားရှိခြင်းသည်လည်းအရေးကြီးသည်။
တစ် ဦး ကချုပ်လုပ်လျှောက်လွှာ
သီးခြားစီးပွားဖြစ် application များသည် YI Technology ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ စျေးကွက်အတွင်းစတင်ထုတ်လွှင့်သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည်အလွန်တိကျသောအပ်နှံထားသောလျှောက်လွှာတစ်ခုပါရှိသည်။ YI Smartphone gimbal နဲ့အတူဒီထက်နည်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ YI Gimbal application ကို Google Play Store မှာရှာနိုင်သည်။
ဒီပြည့်စုံလျှောက်လွှာမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာကိုအမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဘလူးတုသ် activated နှင့်အတူ gimbal ကိုဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် app သည်သူ့ဟာသူဖြစ်သည်။ ဒါပြီးတာနဲ့၊ သင့်စမတ်ဖုန်းကင်မရာ၊ အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာအတူတူတော့ဘူး။
သိပ်မကြာသေးခင်ကမှငါတို့အများစုဟာ gimbal ဆိုတာဘာလဲမသိခဲ့ကြဘူး။ YI Smartphone gimbal ကိုစမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာကြောင့်ဒီဟာကိုဘာကြောင့်ဖက်ရှင်ကျတာလဲ။ က ကွဲကွာ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်အရေးကြီးသကဲ့သို့ ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုကိုအလွန်မြှင့်တင်ထားသည် ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာစမ်းသပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့တဲ့ YI Technology ထုတ်ကုန်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေး။ အဲဒါကိုကမ်းလှမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း။ နှင့်အလွန်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်ရှိသည် သတ်သတ်မှတ်မှတ်လျှောက်လွှာ ကိရိယာအတွက်။ အဲဒါလုပ်ပါ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံထူးချွန်သည်.
ဓာတ်ပုံသည်သင့်အတွက်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပြီးသင်၏စမတ်ဖုန်းကင်မရာမှပိုမိုထွက်လိုလျှင်၊ မစဉ်းစားပါနှင့်။ ငါတို့သည်သင်တို့သာဤစပ်စုနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ gadget ကအပေါ်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ကြိုးစားကြဖို့ကံကောင်းတာကသံသယမရှိဘဲ၊ YI စမတ်ဖုန်း gimbal သည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည်.
ဒီ gimbal လိုကိရိယာမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေတိုးတက်လာနိုင်တာကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ ဥပမာတစ်ခုကြည့်တာထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာမရှိပါ။ ပထမလက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် YI စမတ်ဖုန်း gimbal ဒုတိယနှင့်အတူ \_ t လှေကားထစ်လေးတစ်ခုကျလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ ပုံမှန်အရာ, gimbal မပါဘဲ, ထိုလှုပ်ရှားမှုရိပ်မိနေသည်။
YI စမတ်ဖုန်း Gimbal ၏တည်ငြိမ်မှုသည်လှေကားအချို့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ပါ။
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို Androidsis ပါ အပေါ် @androidsisweb ဇူလိုင် 24, 2018 မှာ 10: 23am PDT ရန်ကုန်
သင်တန်ဖိုးထားနိုင်သကဲ့သို့ ခြားနားချက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည်။ အဆိုပါအောက်ဖက်လှုပ်ရှားမှုအလွန်ချောမွေ့ခြင်းနှင့်ခဲသိသာသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုသည်အရေးမပါဟုထင်လျှင်၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
YI စမတ်ဖုန်း gimbal
YI စမတ်ဖုန်း gimbal သည်သင်၏ဗီဒီယိုများကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်ခြင်းကိုပေးသည်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » YI စမတ်ဖုန်း gimbal ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ